नेपाल आज | हस्तमैथुन गर्नु राम्रो कि नराम्रो, के हस्तमैथुन गर्दा मानसिक असर पर्छ त ?
हस्तमैथुन गर्नु राम्रो कि नराम्रो, के हस्तमैथुन गर्दा मानसिक असर पर्छ त ?
तर, शतप्रतिशत अवस्थामा यसो हुनैपर्छ भन्ने जरुरी छैन । यसका साथै यौन सामग्रीहरूको अध्ययन वा अवलोकन अथवा एकान्तमा तिनको सम्झनामात्र पनि हस्तमैथुनका लागि सहयोगी साधन बन्न सक्छन् । हस्तमैथुन विभिन्न तरिकामध्ये हात वा हातसँग अन्य सामान्य अथवा विद्युतीय साधन (डिल्डो), भाइब्रेटर, जी स्पट स्टिमुलेटर, थुक, जेलीको प्रयोगद्वारा यौनांगको घर्षण वा मर्दन सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने तरिका हुन् । जिब्रो र ओठको प्रयोग पनि त्यसपछि बढी प्रयोग हुने तरिकामध्ये पर्छन् । मुखमैथुनभन्दा अलग्गै हस्तमैथुनका लागि पनि यिनीहरूको प्रयोग भएको पाइन्छ । यसबाहेक यौनांगलाई अन्य कुनै नरम सतहमा घर्षण गर्ने प्रक्रिया पनि प्रचलनमा छ ।
पछिल्ला दुई तरिकामा हातको प्रयोग नहुने भए पनि ती सबै व्यवहारलाई हस्तमैथुन भन्ने गरिन्छ । माथि उल्लेख गरिएझैँ जोडीहरूद्वारा एकअर्कासँगै यौनसन्तुष्टिका लागि गरिने हस्तमैथुनलाई पारस्परिक हस्तमैथुन भनिन्छ । पारस्परिक हस्तमैथुन दुई किसिमका हुन्छन् । पहिलोमा एकअर्काका यौनांगलाई नछोइकन तर एकअर्कासँगै रहेर आ–आफ्ना यौनांग चलाएर गरिने हस्तमैथुन र दोस्रोमा एकले अर्काका यौनांगलाई सँगसँगै चलाइदिएर गरिने हस्तमैथुन पर्छन ।
हस्तमैथुनबाट कुनै पनि किसिमको शारीरिक वा मानसिक हानि हुन्छ भन्नु भोक लागेको मानिसलाई खाना खाएर वा निद्रा लागेको मानिसलाई सुतेर हानि हुन्छ भन्नुजस्तै हो । उम्लिएको यौन चाहनालाई सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने भरपर्दो विधिमा पर्छ हस्तमैथुन । हस्तमैथुनले यौनातुर पुरुष र स्त्रीलाई आफूले राख्न नचाहेको वा सामाजिक नैतिक मान्यताबाहिर परेको यौनसम्बन्धबाट बचाउँछ । असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट सर्न सक्ने विभिन्न यौन रोगबाट जोगाउँछ । हस्तमैथुन गर्ने अनि हस्तमैथुन गरेकामा अनावश्यक पछुतो मानेर आफ्नो मनमस्तिष्कलाई अनावश्यक दबाब पुर्याउने र हस्तमैथुनबाट दुब्लाइन्छ, विवाहपछि यौनजीवन बिग्रन्छ, यौनांग टेढो वा सानो हुन्छ भन्ने जस्ता भ्रम पालेर आफूलाई अस्वस्थ मान्छे ठान्नु भ्रमबाहेक केही होइन ।